အသငျးပွောငျးဖို့ အသိပေးထားတဲ့ ဟယျရီကိနျး ရောကျနိုငျခွအေမြားဆုံးအသငျး ထှကျပျေါလာ – Premier League Special
သတငျးတှရေဲ့ဖျောပွခကျြအရ လာမယျ့နှရောသီအတှငျး အသငျးကနေ ထှကျခှာခငျြတယျလို့ စပါးအသငျးထံအသိပေးထားတဲ့ တိုကျစဈမှူး ဟယျရီကိနျး ရောကျနိုငျခွအေမြားဆုံးအသငျး ထှကျပျေါလာပါတယျ။
အသကျ ၂၇ နှဈအရှယျရှိအင်ျဂလနျအသငျးခေါငျးဆောငျ ဟယျရီကိနျးဟာ လာမယျ့နှရောသီမှာ အသငျးကနေ ထှကျခှာဖှယျရှိနရော ကလပျအသငျးအမြားအပွားက သူ့ကို ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနပေါတယျ။
ပွညျတှငျးပွိုငျဘကျတှဖွေဈတဲ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ ခြဲလျဆီးတို့က ကစားသမားရဲ့ကိုယျစားလှယျတှဆေီ ဆကျသှယျခဉျြးကပျထားပွီးဖွဈသလို စပါးနညျးပွဟောငျး ပိုခကျြတီနို ကိုငျတှယျနတေဲ့ ပီအကျဈဂြီကလညျး သူ့ကို ချေါယူုဖို့ စိတျအားထကျသနျနပေါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လကျရှိပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံ မနျစီးတီးက ဟယျရီကိနျးကို ချေါယူဖို့ အခွအေနအေကောငျးဆုံးဖွဈနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
talkSPORTသတငျးဌာနက အထကျပါအတိုငျး ရေးသားထားတာဖွဈပွီး ကစားသမားဖွဈသူက ပွညျပထှကျကစားတာထကျ ပရီးမီးယားလိဂျမှာပဲ ဆကျလကျကစားလိုနပေါတယျ။
စီးတီးဟာ လာမယျ့နှရောသီမှာ အသငျးနဲ့စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးတော့မယျ့ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး အဂှဲရိုးရဲ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့ နှဈေေးကှကျအတှငျး တိုကျစဈမှူးချေါယူဖှယျရှိနပေါတယျ။
စီးတီးဟာ ဒေါ့မှနျလူငယျကွယျပှငျ့ ဟာလနျးကို ချေါယူဖို့ သတငျးတှကေယျြပွနျ့စှာထှကျပျေါနပွေီး သူ့ကို ချေါယူဖို့ ပွိုငျဘကျအမြားအပွားနဲ့ ရငျဆိုငျရဖှယျရှိနပေါတယျ။
ဟယျရီကိနျးဟာ သူ့ရဲ့အနာဂတျကို ယူရို ၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲမတိုငျခငျ ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့နပေမေယျ့ နှရောသီတဈခုလုံး သူ့ရဲ့သတငျးတှကေ ပရိသတျတှစေိတျဝငျစားတဲ့ အပွောငျးအရှသေ့တငျးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
သူ့ရဲ့စာခြုပျသကျတမျးက ၂၀၂၄ နှရောသီရောကျမှ ကုနျဆုံးမှာဖွဈပွီး စပါးအသငျးက သူ့ရဲ့ပွောငျးရှကွေ့ေးအဖွဈ ပေါငျသနျး ၁၅၀ အထိ တောငျးဆိုဖှယျရှိနပေါတယျ။
LONDON, ENGLAND – MAY 16: Harry Kane of Tottenham Hotspur celebrates after scoring their side’s first goal during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Wolverhampton Wanderers at Tottenham Hotspur Stadium on May 16, 2021 in London, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images)
အသင်းပြောင်းဖို့ အသိပေးထားတဲ့ ဟယ်ရီကိန်း ရောက်နိုင်ခြေအများဆုံးအသင်း ထွက်ပေါ်လာ
သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ လာမယ့်နွေရာသီအတွင်း အသင်းကနေ ထွက်ခွာချင်တယ်လို့ စပါးအသင်းထံအသိပေးထားတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်း ရောက်နိုင်ခြေအများဆုံးအသင်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းခေါင်းဆောင် ဟယ်ရီကိန်းဟာ လာမယ့်နွေရာသီမှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိနေရာ ကလပ်အသင်းအများအပြားက သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။
ပြည်တွင်းပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့က ကစားသမားရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီ ဆက်သွယ်ချဉ်းကပ်ထားပြီးဖြစ်သလို စပါးနည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီကလည်း သူ့ကို ခေါ်ယူုဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံ မန်စီးတီးက ဟယ်ရီကိန်းကို ခေါ်ယူဖို့ အခြေအနေအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
talkSPORTသတင်းဌာနက အထက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး ကစားသမားဖြစ်သူက ပြည်ပထွက်ကစားတာထက် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာပဲ ဆက်လက်ကစားလိုနေပါတယ်။
စီးတီးဟာ လာမယ့်နွေရာသီမှာ အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ့် ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး အဂွဲရိုးရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ နွေဈေးကွက်အတွင်း တိုက်စစ်မှူးခေါ်ယူဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
စီးတီးဟာ ဒေါ့မွန်လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဟာလန်းကို ခေါ်ယူဖို့ သတင်းတွေကျယ်ပြန့်စွာထွက်ပေါ်နေပြီး သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ ပြိုင်ဘက်အများအပြားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
ဟယ်ရီကိန်းဟာ သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကို ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေပေမယ့် နွေရာသီတစ်ခုလုံး သူ့ရဲ့သတင်းတွေက ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းက ၂၀၂၄ နွေရာသီရောက်မှ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး စပါးအသင်းက သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးအဖြစ် ပေါင်သန်း ၁၅၀ အထိ တောင်းဆိုဖွယ်ရှိနေပါတယ်။